I-SciBabe ithi yidla izibulala-zinambuzane zakho. Kepha ubani omkhokhelayo?
Posted on Mashi 31, 2018 by UStacy Malkan
Isayensi embi yeSciBabe izama ukwenza imboni yezibulala-zinambuzane ibukeke kahle.
Ukubhuloga ngaphansi kwegama SciBabe, UYvette d'Entremont uvikela amakhemikhali anobuthi emikhiqizweni yokudla futhi akhuthaze izibulala-zinambuzane njengeziphephile. Uthole uxhaso ne-honouraria ezinkampanini ezahlukahlukene kanye namaqembu ezimboni.
Ngo-2017, inkampani eyenziwe ngoshukela yokufakelwa iSPLENDA waqasha uSciBabe ukwenza "i-debunk junk science" ukuvikela umkhiqizo wabo. USciBabe ubeyisikhulumi esifakiwe kumakhemikhali ahlukahlukene nasekudleni imicimbi exhaswe imboni njengengqungquthela yango-2017 ye-Atlantic Farm Women exhaswe ngu ICropLife neMonsanto, Umbukiso Wabahlinzeki ngo-2015 lapho inkulumo yakhe yesidlo sasemini ibikhona exhaswe yiDuPont, kanye nomhlangano waminyaka yonke we-CropLife America ka-2016 lapho inkulumo yakhe eyisihluthulelo yayikhona exhaswe nguMonsanto. Ngokusho kwe- Ukudalulwa okubikiwe kwe-webinar yango-2017, d'Entremont usebenza njengomxhumanisi ku-SPLENDA futhi uthole i-honaria evela, phakathi kwabanye, Abakhiqizi Bokunambitheka, Abalimi Bama-Florida Dairy, i-CropLife, i-American Soybean Association kanye ne-CA Beet Growers.
Ezingxoxweni, uSciBabe uvame ukubalula umsebenzi wakhe wangaphambili ebhodini lezibulala-zinambuzane njengesisekelo solwazi lwakhe ngokuphepha kwezibulala-zinambuzane.
Usebenze enkampanini yokubulala izibulala-zinambuzane eyimpikiswano eyayinesivumelwano neMonsanto ukukhuthaza ama-GMO
Ngaphambi kokuba abe yi-blogger yesikhathi esigcwele, uYvette d'Entremont wasebenza njenge-an isazi samakhemikhali sokuhlaziya at I-Amvac Chemical Corporation, “okwenza ibhizinisi elichumayo lithengise ezinye zezibulala-zinambuzane eziyingozi kakhulu emhlabeni,” ngokusho kwendaba yango-2007 kuyi- I-Los Angeles Times:
“I-Amvac ikhuthaze ukukhula kwemali engenayo enamadijithi amabili ngomkhuba webhizinisi ongajwayelekile: Ithenge ezinkampanini ezinkulu amalungelo emithi yokubulala izinambuzane endala, iningi layo lisengozini yokuvinjelwa noma ukuvinjelwa ngenxa yokukhathazeka ngokuphepha. Le nkampani ilwele ukugcina lawo makhemikhali emakethe isikhathi eside ngangokunokwenzeka, eqasha ososayensi nabameli ukuba balwe nezinhlangano ezilawulayo. Ukugxila kwe-Amvac emithini yokubulala izinambuzane endala kubize impilo yabantu kanye nemvelo, ngokusho kweFederal Environmental Agency Agency (EPA) kanye namarekhodi wombuso, uphenyo lwezomthetho kanye nochungechunge lwamacala. Izingozi ezibandakanya izibulala-zinambuzane zale nkampani ziholele ekutheni kuthuthwe omakhelwane futhi kufakwe nobuthi eziningini zabasebenza emasimini eCalifornia nakwezinye izindawo. ”
I-Amvac Chemical Corporation ine- Okukhethekile isivumelwano neDow Chemical Corporation ukuthengisa iLorsban eyenziwe nge-chlorpyrifos, a isibulala-zinambuzane esiyimpikiswano ukuthi amashumi eminyaka ka isayensi iphakamisa ngokuqinile kulimaza ubuchopho bezingane. I-EPA ithe ama-chlorpyrifos kufanele ivinjelwe, kepha isasetshenziswa kabanzi kuma-apula, amawolintshi, ama-strawberry kanye ne-broccoli, futhi i-Amvac iyimaketha njenge “ukukhetha okulungile!”I-Amvac nayo ine- Isivumelwano neMonsanto ukukhuthaza izitshalo zeRoundup Ready GMO.
I-2016 Monsanto ixhase inkulumo yeSciBabe.
Izitatimende ezingamanga mayelana nezibulala-zinambuzane nama-GMO, nethonya le-Amvac
I-SciBabe yenza izimangalo ezingamanga mayelana nezingozi zezempilo kanye nezinqubo zokuphepha zezibulala-zinambuzane, ama-GMO namakhemikhali ekudleni:
“Sifakazele ngokukhulu ukucophelela ukuthi, uma bengena ekudleni, [izibulala-zinambuzane] ziphephile kubantu… ngoba sisendaweni elawulwa kakhulu, amathuba okuthi uthole okuthile ekudleni kwakho okungaphephile kuleli qophelo liphansi kakhulu, liphansi kakhulu. Ngisho, ngiphansi ngokweqile. ” (podcast noprofesa waseYunivesithi yaseFlorida UKevin Folta)
Okokunandisa okwenziwe kuphephile ngaphandle kobufakazi bokulimala. (SciBabe ibhulogi; Nawa amaqiniso mayelana izingozi zempilo ze-aspartame)
Kuma-GMO, “Kunamazinga wokuhlola abucayi akhona avela ku-EPA, FDA, ne-USDA. Ama-GMO ahlolwe kuze kube sekugcineni kwe-DNA. ” (esihlokweni ngoba Iphrojekthi Ye-Genetic Literacy Project)
USciBabe ubonga umsebenzi wakhe wangaphambili ebhodini le-Amvac ngokumkhuthaza ukuthi abambe iqhaza njengomxhumanisi wesayensi:
“Ngesikhathi ngisebenza lapho, kulapho-ke lapho ngaqala khona ukungena engxabanweni yalolu hlobo lwempi esinayo kwi-Internet nabantu abathi alukho ucwaningo olwenziwe ngalezi zinambuzane ngaphambi kokuba kuqale imakethe. Futhi ngifana noyebo, ngivele ngikhothe okubi bese ngithi mhlawumbe ngeke zibulale izingane zakho ngaphambi kokukuvumela ukuthi kuthengiswe - okuyinto engikuthembisa yona, akusebenzi kanjalo. ” (i-podcast)
"Ngiqale i-blog ngenkathi ngisebenza lapho, futhi ngokwengxenye ngoba bengilokhu ngibona imininingwane emibi kakhulu ku-inthanethi mayelana nezibulala-zinambuzane." (Isayensi Edumile Q&A)
“Njalo lapho ngibona impikiswano ku-inthanethi yokuthi (ama-GMO) awahlolelwa ukuphepha, ngangibona ebhodini lami lezibulala-zinambuzane engangisebenza kulo, sasikhona. Ngifana nokuthi, 'Lezi zingavivinyelwa kanjani ukuphepha uma umsebenzi wami ngqo uvivinya ukuphepha?' Futhi kwesinye isikhathi bengichitha amasonto amabili ngilinganisela insimbi eyodwa, futhi ngiyisigaxa esisodwa emshinini. Futhi ngiyazi ukuthi ezinye izinhlangothi zicophelelayo njengami. ” (Isayensi Edumile)
Abangane beqembu langaphambili
Umsebenzi weSciBabe ngu njalo kukhuthazwe ngu izimboni zamakhemikhali amaqembu angaphambili, njenge Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo (eye uthole imali kusuka ku-Amvac Chemical Corporation) kanye ne- Iphrojekthi Yezofuzo.
I- "Kevin Folta Fan Club" ungubani wobungani beMonsanto kanye nabavikeli bezibulala-zinambuzane.
I-SciBabe iyingxenye yalokho akubiza nge- "Kevin Folta Fan Club" evikela uprofesa wase-University of Florida owenze kaninginingi izitatimende ezingamanga nezidukisayo. Isithombe seklabhu yabalandeli sibonisa i-d'Entremont noJulie Gunlock we Inkundla Yabesifazane Ezimele, iqembu elixhaswa ngezimali nguKoch lelo abalingani neMonsanto ukwehlisa ukwesaba mayelana nezibulala-zinambuzane; i-propagandist ye-pesticide UJulie Kelly; kanye nesayensi yezenhlalo kaMonsanto kuhola uCami Ryan.
Okuningi ku-Yvette d'Entremont:
“USciBabe Akayena Usosayensi Noma Uyingane: UnguBullshit,” Medium
“Impendulo kuGawker 'I-Food Babe Blogger igcwele…,” UkudlaBabe
"ISciBabe, ekhokhwa ngabakwaSplenda, ithinta umkhiqizo wayo," nguJerry Coyne, PhD, uprofesa e-Univ. waseChicago.
Odokotela, ososayensi batusa ukunciphisa ukutholakala kwemithi yokubulala izinambuzane
Izinsizakusebenza zokufunda kabanzi ngobungozi bezibulala-zinambuzane nemithetho ebuthakathaka eyehluleka ukuvikela impilo:
I-American Academy Yezingane uncoma ukunciphisa ukutholakala kwezingane emithini yokubulala izinambuzane. Nayi i-AAP ka-2012 iphepha lesikhundla sesayensi.
“Ubufakazi be-Epidemiologic bubonisa ukuhlangana phakathi kokuchayeka zisencane kwezibulala-zinambuzane nomdlavuza wezingane, kwehle ukusebenza kwengqondo, nezinkinga zokuziphatha. Izifundo ezihlobene nobuthi bezilwane zihlinzeka ngokusekelwa kwezinto eziphilayo ngokusekelwa kwalokhu okutholakele. Ukubona nokunciphisa ukuvezwa kwezinkinga kuzodinga ukunakekelwa kokuntuleka kwamanje ekuqeqesheni ubudokotela, ukulandela umkhondo wezempilo yomphakathi, kanye nezinyathelo zokulawula izibulala-zinambuzane. ”
Umbiko KaMongameli Wephaneli Yomdlavuza incoma ukwehlisa ukuvezwa kwezingane ekuchayekeni kwemvelo okubangela umdlavuza kanye nokukhuthaza umdlavuza.
“Abantu baseMelika — ngisho nangaphambi kokuba bazalwe — bahlaselwa njalo ngenhlanganisela eyinqwaba yalezi zingozi eziyingozi. IPhaneli ikunxusa kakhulu ukuthi usebenzise amandla ehhovisi lakho ukususa izidalwa zomzimba nezinye izinto ezinobuthi ekudleni kwethu, emanzini nasemoyeni ezikhuphula ngokungadingekile izindleko zokunakekelwa kwempilo, zikhubaze umkhiqizo weSizwe sethu, futhi zichithe izimpilo zabantu baseMelika. ”
Isahluko sikaPresident's Cancer Panel ngemithi yokubulala izinambuzane siqala ekhasini 43:
“Cishe i-1,400 yezibulala-zinambuzane ibhalisiwe (okungukuthi, ivunyelwe) yi-EPA ukuze isetshenziselwe ezolimo nokungasetshenziswa kwezolimo. Ukuchayeka kulawa makhemikhali kuxhunyaniswe nesistimu yezinzwa yobuchopho / emaphakathi, isifuba, ikholoni, amaphaphu, ama-ovari (abashadikazi besifazane), i-pancreatic, izinso, amasende, nomdlavuza wesisu, kanye neHodgkin ne-non-Hodgkin lymphoma, i-myeloma eminingi, kanye i-sarcoma yezicubu ezithambile. Abalimi abachayeke ngezibulala-zinambuzane, abafaka izibulala-zinambuzane, abashayeli bezindiza zezitshalo, nabakhiqizi nabo batholakale benamazinga aphakeme omdlavuza wendlala yabesilisa, i-melanoma, eminye imidlavuza yesikhumba nomdlavuza wezindebe. ”
Ukuhlolwa Kokukhethwa Kokukhethwa Kokukhetha KwePhalamende laseYurophu le-2016 Kunconywe ukwehliswa kokudla kwezibulala-zinambuzane, ikakhulukazi kwabesifazane nezingane.
Ukuhlolwa kobungozi bezibulala-zinambuzane “akubunaki ubufakazi obuvela ocwaningweni lwezifo ezibonisa imiphumela engemihle yokuchayeka ezingeni eliphansi emithini yokubulala izinambuzane ye-organophosphate ekukhuleni kwengqondo yezingane, yize kunezindleko ezinkulu zokulahlekelwa yi-IQ emphakathini. Yize ukungeniswa kwezithelo nemifino kungafanele kwehliswe, izifundo ezikhona zisekela umgomo wokunciphisa ukutholakala kokudla kuzinsalela ze-pesticides, ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe nezingane. ”
Ijenali yokuphawula kwe-American Medical Association nguPhillip Landrigan, MD, uncoma ukuthi kudliwe ukudla okuphilayo.
"Isimo sethu samanje se-laissez-faire maqondana nokulawulwa kwemithi yokubulala izinambuzane siyasihluleka"
"Ubufakazi obuningi buveza ukuthi inzalo yomuntu iyancipha nokuthi imvamisa yokukhubazeka kokuzala iyanda." Lezi zinkambiso “cishe” zixhunyaniswe nokuchayeka kwemvelo kumakhemikhali
Bhekafuthi Isifundo seHarvard pesticide / infertility kuJAMA: Abaphenyi baseHarvard balandela abesifazane abangama-325 emtholampilo wokuzala iminyaka emibili futhi babika ukuthi abesifazane abadla njalo izithelo nemifino elashwa ngezibulala-zinambuzane banamazinga empumelelo aphansi okukhulelwa i-IVF
Isitatimende sokuvumelana esivela ososayensi abahola phambili: Ukukhathazeka ngezingozi zemithi yokubulala ukhula esekwe ku-glyphosate nezingozi ezihambisana nokuchayeka, i-Environmental Health Journal
Izindaba zakamuva ngemithi yokubulala izinambuzane
I-chlorpyrifos yokubulala izinambuzane kaDow ikhonjiswe ukuthi ilimaza ubuchopho bezingane kanti ososayensi uqobo lwe-EPA bathe ngo-2016 abasakwazi ukufakazela ukuphepha kwesibulala-zinambuzane ekudleni noma emanzini, kodwa isasetshenziswa kakhulu kwezolimo ngenxa yengcindezi yezepolitiki evela embonini yezolimo.
Icala Elinamandla Ngokuphikisana Nesibulala-zinambuzane Alisho I-EPA Ngaphansi Kwetrump, NguRoni Caryn Rabin New York Times
Yilokhu okwenziwa ngumuthi wokubulala izinambuzane ebuchosheni bengane, NguNicholas Kristof New York Times
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, I-Amvac Chemical Corporation, Abesifazane base-Atlantic Farm, UCami Ryan, CropLife, IDow Chemical, Dupont, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Inkundla Yabesifazane Ezimele, UJulie Gunlock, UJulie Kelly, UKevin Folta, IKlabhu yabalandeli bakaKevin Folta, Monsanto, Sci Babe, Splenda, Umbukiso wababoneleli, University of Florida, Yvette d'Entremont